Iwo mashanu Anobatsira maPosvo mune chero Musika | Martech Zone
Chipiri, February 23, 2010 Svondo, Kurume 24, 2013 Grant Lange
Muhupenyu hwangu hwekare hwekambani, ndaigara ndichishamisika nemukana wekutaurirana pakati pevanhu vaigadzira zvigadzirwa, uye nevanhu vanozvitengesa nekuzvitengesa. Kuva tinkerer uye kugadzirisa dambudziko remagariro, ini ndaizogara ndichiedza kutsvaga nzira yekuvhara gwanza pakati pevaiti nevatengesi. Dzimwe nguva kuedza uku kwakabudirira, dzimwe nguva ivo vaisakwanisa. Asi mukati mekuyedza kugadzirisa mashandiro emukati memakambani andakashandira, ndakagumburwa pane zvandinotenda kuti ndezvimwe zvokwadi pamusoro pekumaka nekugadzira zvigadzirwa.
Chokwadi chekutanga, Brand Kutarisa, inotsanangurwa pano.
Chokwadi chechipiri, Chikamu Chinzvimbo, mashandiro anoita makambani pamusika, uye chinzvimbo mumusika chinoraira kubudirira. Izvo zvinotevera kutsanangurwa kupfupi kwechirevo ichi, pamwe nemienzaniso yenzvimbo imwe neimwe. . kutsvaga yangu sosi yepakutanga kweanoda kusvika makumi maviri emakore)
Microsoft, iri kambani hombe yemarudzi akawanda, inokwikwidza kwese kwese. Mune akawanda ezvigadzirwa zvavo, ivo havangove chete vane chikamu chemusika, asi vane yavo ingangoita iyo yese musika. Asi mune dzimwe nzvimbo ivo vari wechipiri wechipiri, wechitatu, kana wechina. Nei izvi? Kunyangwe mhinduro izere uye yehunyanzvi, mhinduro yevatengi iri nyore: zvikamu, kwete mabhureki, zvinotsanangura kubudirira mumusika.
Chikamu, chinotsanangurwa, izvo izvo mushandisi zvaungaronga chigadzirwa chako kuti chive. Kana ndikakubvunza kuti rudzii rwechigadzirwa Windows XP, ungangondiudza? Saka Sisitimu Inoshanda ichave iri chikamu chechigadzirwa, uye Microsoft yaizonyatso kutonga chikamu ichi.
Asi kana ndikakuratidza Zune uye ndikakumbira chikamu, ungangondiudza MP3 Player. Microsoft iri pachena kurasikirwa nechikamu ichi kuApple. Nei Microsoft ichizosarudza kukwikwidza pano, nepo Apple ichinyanya kutonga? Zvakanaka, zvinoitika kuti pane mari inofanirwa kuitwa kuve yakanaka nhamba mbiri kunyangwe iyo nhamba yekutanga iri yakakura. Muchokwadi pane nzvimbo shanu dzakasiyana muchikamu icho chinobatsira, kana iwe uchiziva mashandisiro acho.
Iwo mashanu Anobatsira Chikamu Chikamu
Nzvimbo shanu dzinobatsira dzechero musika chikamu ndedze Mutungamiriri weMusika, Wechipiri, Iyo Imwe nzira, Boutique, Uye Nyowani Chikamu Mutungamiriri. Mune chimwe nechimwe cheizvi zvinokwanisika kuita mari, uye zvinokwanisika kukura. Asi zviri padhuze nekusagona kufamba kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe pasina rubatsiro rwekunze.
Mumufananidzo uri pamusoro, chinzvimbo chimwe nechimwe chinodhonzwa munzvimbo yaro yemusika chikamu uye saizi. Sezvaunogona kuona, saizi dzinowana dziri diki nekukurumidza. Saka nei zviri padhuze nekutadza kufamba? Nekuti kana chinzvimbo chega chega chiri chidiki pane icho chiri pamberi pacho, mari inodiwa yekuchinja chinzvimbo inodarika purofiti kubva mukuchinja.
Zvino, ngatitarisei pachigaro chimwe nechimwe, kuti tione kuti chinzvimbo chimwe nechimwe chakasiyana sei. Nezveichi chiitwa, tinogona kushandisa koka chikamu, nekuti chinonyatsonzwisiswa nevanhu vazhinji.
Chinzvimbo Chekutanga: Mutungamiri weMusika
Coke, hongu, ndiye mutungamiri. Ivo vari kwese kwese, uye purofiti yavo inoshamisa. Ivo muenzaniso mukuru wemutungamiri. Uye nekuti vane mukwikwidzi akasimba kudaro muPepsi, havakwanise kuve nechero chikamu chemusika. Saka yavo chete chaiyo sarudzo yekukura ndeyekupinda misika mitsva. Sei? Nekuti zvakachipa kwazvo kuvhura China kugovera pane kuti Pepsi ibude muSafeway.
Nzvimbo Yechipiri: Yechipiri
Pepsi iSecond yakasimba. Ivo zvakare vari kwese kwese, uye vanonyatsofungidzirwa senzira yega yeCoke. Saka vanokura sei? Kutora mugove kubva kuCoke kunodhura uye kwakaoma, asi kupinda muChina gore rimwe chete mushure mekokora kuri nyore uye kwakachipa. Ivo vanogadzira kubva kuboka reCoke kukura.
Chinzvimbo chechitatu: Iyo Imwe nzira
Mune dzimwe nzvimbo dzenyika RC Cola ndiyo imwe nzira. Asi ivo havasi kwese kwese, uye havana simba rekushambadzira iro rakakura riinahwo. Saka vanokura sei? Nzvimbo nenzvimbo. Ivo vanonongedza chaiwo makwara uko ivo vanogona kunge vanoonekwa sewemuno kana akasarudzika uye vachikura? Musuwo kune rimwe imba?
Chinzvimbo Chechina: Iyo Boutique
Jones soda ndeye quintessential Boutique. Vanotengesa cola, asi Jones ishoma nezvecola, uye zvimwe nezve chiitiko checola. Iyo cola inongouya chete mumabhodhoro egirazi ane shuga yakachena yenzimbe, tsika yemifananidzo pane zvakanyorwa, uye mutengo wepamusoro. Izvi zviri pachena kuti hazvisi zvemakwikwi epamusoro kune vakuru. Asi zvakadaro zvinobatsira, uye vane vateveri vakavimbika. Sei? Nekuti ivo vanonyanyisa kuendesa kune imwe subgroup revatengi vecola.
Chinzvimbo cheshanu: Iyo Nyowani Chikamu Mutungamiriri (NCL)
Saka kana iwe uchida kukanganisa chikamu, unozviita sei? Ini pachangu, ndaizobvunza musika njere kuseri kweRed Bull. Vakavaka humambo hwese vachiudza munhu wese kuti ivo vaisiri cola, asi simba? Ehe Red Bull yaisakwanisa kukwikwidza neCoke pavakatanga. Asi ivo vaigona kuudza vanhu yavo chikamu, Energy, yaive nani. Uye hakusi kukwikwidzana naCola zvakadaro here? Vakashandisa chikamu chavo chitsva kuti vapinde pamashefu ezvitoro ayo koka raitokunda. Uye ivo vakazviita vasina kumbokwikwidza neCoke kana Pepsi musoro kumusoro.
Hukuru, saka nei izvi zvine basa?
Mubvunzo wakanaka. Uye mhinduro inouya kune izvi: kana iwe uchiziva chinzvimbo chako, iwe unoziva kukwikwidza zvine pundutso. Kana iwe usingazive paumire, iwe ungangodaro uchatengeswa bhizinesi, kushambadzira, kana chirongwa chekukura icho chinoparadza mari yakawanda kuyedza kukuendesa kunzvimbo yausingakwanise kutora. Zvinotonyanya kukosha, kana iwe uchinge waziva chinzvimbo chako, unogona kuvandudza bhizinesi uye kushambadzira zvirongwa zvinosimbisa nzvimbo dzako dzebatsiro, uye nekupa yakakwira mareti ekudzoka.
Tags: Grantlangenzvimbo dzekutengesaNyowani Chikamu MutungamiririIyo Imwe nziraBoutiqueMutungamiriri weMusikaWechipiri
Grant Lange ndeimwe yenhengo dzekutanga dze Uchapupu Studio, yekumaka uye chigadzirwa kukura pamwe. Iye anoshanda nemakambani zvese zvidiki uye zvidiki kugadzira zvinoshanda zvekumaka uye zvigadzirwa zvigadzirwa.
Kugadzirisa Dhijitari uye Chinyakare: Izvo Zvinhu zvidiki zvine basa
Feb 23, 2010 at 10:59 PM
Nguva dzose zvakanaka kuongorora uye ini ndinoda chaizvo mharidzo - Waita Zvakanaka uye zviri pachena kuti ndiri Boutique 🙂
Kukadzi 24, 2010 na1:54 PM
Imwe inonakidza twist ndeyekuti-zvinoenderana nekuti mutengi arikutsvagei-iwe unogona kunge uri mumabasa akasiyana. Semuyenzaniso, Jones ndiye mutambi ane mukurumbira muboutique/craft/premium sodas, asi zviri pachena iyo boutique kana ikatariswa necoke.
Ndizvo zvinoita kuti mabasa edu anakidze.